तिथि मेरो पत्रु » किन पुरुष प्रेम निर्दयी रानी मौरीहरूले
द्वारा Carisa पिटरसन
किन पुरुष प्रेम निर्दयी रानी मौरीहरूले
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सेप्टेम्बर. 19 2020 |3मिनेट पढ्न
यो एक डेटिङ साइट भएको छ, र पाल्तु जनावर माया गर्नेहरूका लागि एक डेटिङ साइट, कम छैन. त्यसैले हामी महिला कुकुर बारेमा एक मिनेट को लागि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? र म अर्थ “महिला कुकुर” सबैभन्दा euphemistic अर्थमा, यो canines छैन भन्छिन् रूपमा, तर महिला दिन्छ कि आफ्नो मानव प्रजाति समकक्ष आफ्नो खराब नाम कुत्तों. तर कारण यो एउटा SFW साइट र फिर्ता महिला कुकुर गर्न आदर दिन र तिनीहरूले प्रेम गर्न प्रयास छ गरेको Heartless रानी मौरीले बारेमा सट्टा कुरा योग्य-गरौं (वा HQBs) र उनीहरूलाई प्रेम, र राम्रो हाम्रो आफ्नै सम्बन्ध बनाउन तिनीहरूलाई सिक्न के छ.
समय र समय फेरि, म को घटना को प्रथम हात साक्षी छन् “राम्रो मान्छे HQB प्रेम”. यो साँच्चै एउटा Marvel मायालु छ हेर एक-, दयालु भावनाका, देखिन्छ जो विनम्र र उदार मानिस सधैं आफ्नो HQB लागि पछिल्तिर मा झुकन को स्थिति मा हुन; र त्यो पनि उनको माग सुनिरहेका र उनको indiscriminate घृणा को चोट बोकेका हरेक मिनेट प्रेम देखिन्छ. तर यी सम्बन्ध पनि म दीर्घायु को मामला मा देखेको छु सबै भन्दा केही छन्; र यसैले पनि, म सोच्नु जरूरी छ, सम्बन्ध सफलता केही हदसम्म को मामला मा.
त्यसैले के हामी गर्न सक्छन्, रूपमा सभ्य, विचारशील महिला आकर्षित र तिनीहरूले आकर्षित र पालन कुनै समस्या छ जस्तो देखिन्छ कि मानिसहरूको प्रकारको राख्न HQBs सिक्न?
1) HQBs पहिचान बलियो अर्थमा छ
HQBs तिनीहरूलाई चिन्नुहुन्छ र तिनीहरूले के चाहनुहुन्छ. तिनीहरूले थाहा तिनीहरूले तालिका के ल्याउन र आफ्नो चासो आफ्नै छन् किनभने तिनीहरू रोचक र तिनीहरूले साझेदार गरेको चासो देखि अद्वितीय हुन सक्छ. यो आफैलाई मिति गर्न बोरिंग छ, र HQBs यस बाहिर लाग्यो छन्.
2) HQBs दुनिया को आदेश छ
एक HQB उनको वरिपरि संसारको आदेश छ जस्तो देखिन्छ (त्यो साँच्चै गर्छ कि छैन). यो गुण उनको साझेदार गरेको एक अवचेतन बढावा प्रदान अहम्-यदि त्यो उसलाई खुसी बनाउन केहि नियन्त्रण छ, र त्यो वशमा छ “विश्व”, उहाँले नियन्त्रण छ “विश्व” प्रोक्सी द्वारा. त्यो सारा छ “यदि = बी र बी = सी, त्यसपछि एक = सी” कुरा. यो उपयोगी टिप मा कसरी अनुवाद गर्छ? सभ्य, तपाईं र मलाई गर्छन जस्तै विचारशील मानिसहरूले हाम्रो कार्यहरू र संचार संग धेरै दाबी हुन गर्न. दाबी हुँदा आक्रामक हुनुको भन्दा धेरै फरक छ, जो आधारभूत M.O छ. आफ्नो औसत HQB र बिरामी-मिल्यो कि उनको दिन्छ के छ, को कमजोर नियन्त्रण “विश्व”. तर थप दाबी रहेको आफ्नो संसारको एक ठूलो आज्ञा उपज हुनेछ, आक्रमण को अन्यथा नकारात्मक परिणाम बिना. यो एउटा उदाहरण तपाईं के चाहनुहुन्छ राज्य गर्न बस हो र किन यसलाई आफ्नो दृष्टिकोणबाट अर्थमा बनाउँछ, बिना को होच्याएर, कृपालु रिस त अक्सर HQBs द्वारा यस्तै अनुरोध मा कार्यरत.
3) सदा लोकप्रिय र सिद्ध, “एक चुनौती जस्तै पुरुषहरु”!
धेरै डेटिङ लेख र किताब तपाईं पुरुष एक चुनौती प्रस्तुत हुन चाहनुहुन्छ आधारभूत विचार केही संस्करण समर्पित छन् भनेर पढ्न छ कसरी, तिनीहरूले यसो भने चुनौती कब्जा गर्न सक्षम छन् त्यसैले तिनीहरू अतिरिक्त विशेष महसुस? तर, आफूलाई, एक सधैं-उपलब्ध खुला पुस्तक हो जसले एक भन्दा बढी आकर्षक अधिक मायावी महिला फेला को कुरा हुनेछ. कहिलेकाहीं elusiveness प्रकट-कसरी रूपमा म भन्न-हुनुको गर्नुपर्छ सकारात्मक भावना वा प्रतिक्रिया कुनै पनि प्रकारको व्यक्त संग एक सानो stingy (जो HQBs मा आएको जहाँ छ). केही मानिसहरू एक HQB देखि सुखद प्रतिक्रिया कुनै पनि प्रकारको अवैध गर्न प्रयास को चुनौती प्रतिरोध गर्न सक्दैन र त त्यो ठूलो चासो वस्तु हुन्छ.
तपाईं कसरी गर्न (फेरि, यो सभ्य रूपमा, तपाईं विचारशील महिला) एक चुनौती को अधिक अस्तित्व मा आफैलाई बारी? यो सजिलै disingenuous खेल-प्लेइङ बन्न सक्छ भन्ने पुस्तकहरू जस्तै “नियम” (Fein र Schneider) सबै, जो सबैका लागि काम नगर्न सक्छ र तपाईं भन्न के र कहिले बारेमा बिरामी-भावना र भ्रमित हुन सक्छ. बरु, साँच्चै पूर्ण र हुन आफ्नो जीवन निर्माण अप तपाईंलाई मिति तल नङ साँचो चुनौती रोमाञ्चक बनाउने. मात्र यो कि सारा बन्द जाँच गर्नेछ “एक चुनौती हुन” यति ungracefully HQBs विशेषता भनेर श्रेय (मानिसहरूलाई आकर्षक पाउन कि), तपाईं उसलाई आफ्नो स्पष्ट बहुमूल्य समय खर्च गर्न बिन्दु बनाएको तर जब आफ्नो मिति कि धेरै महत्वपूर्ण महसुस हुनेछ.
4) कुनै खेल
मानिसहरू खेल-कि यो तिनीहरूलाई गर्नसक्छु अलि धेरै परिपक्व भएर छ अनुमान लाग्यो स्वीकारिरहेका छोड जब एक समय आउछ, वा सम्बन्ध नै यसको प्रारम्भिक flirtation परे उत्पादन भएको. सायद यो टिप कम्तिमा आंशिक सारा विसंगति HQB / राम्रो केटा सम्बन्ध द्वारा प्रस्तुत "दीर्घायु" संग जम्मा गर्न सकिन्छ. HQBs तिनीहरूले के चाहनुहुन्छ भन्न, र जब उनि यसलाई चाहनुहुन्छ. त्यहाँ एउटा HQB सामना केही खेल र intangibles छन्, र धेरै मानिसहरू यो ताजा फेला. तपाईंको संचार संग सरल हुनुको सुझाव-अघिल्लो को एक जोडी तत्त्वहरू यो सम्बन्ध (I.E. जा हुकुमी), त्यो पहिले नै यो प्रदान होइन भने तपाईं आफ्नो साथी देखि इच्छा के संग धेरै स्पष्ट, तपाईं प्रस्तुत गर्नुभएको एक चुनौती सम्भवतः तिनले तपाईं त स्पष्ट भएको छु किनभने पूरा गर्न माथि कदम आनन्द उठाउनेछन् र त्यो व्यर्थ हुनेछ प्रयासमा डर छैन कि.
त्यसैले, दयालु मन-ले हृदय, र यी सुझाव हृदय-र शायद हामी आफूलाई लागि राम्रो केटा बजार को एक सानो ठूलो साझेदारी दाबी गर्न सक्छन्!
सेक्स कसरी महत्त्वपूर्ण छ?
3 एक विद्यार्थी बजेट मा डेटिङ राज
5 एक Wingwoman सम्झना गर्न लागि कुराहरू
साना माया देखाउँछ कसले एक केटी तिथि लागि कसरी
तपाईंको पांच होश प्रयोग तिथि-सेक्सी हुन कसरी